🥇Ezona Brokers zoRhwebo zeSilivere ngoNovemba 2021 | Isikhokelo sokuRhweba sasimahla sePro!
Abarhwebi abaSilivere abaGqwesileyo 2021
24 Novemba 2020 | Ukuhlaziywa: 3 Novemba 2021
Uluvo lokurhweba ngentsimbi exabisekileyo lunokuonwabisa kakhulu. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ungene ngombono ocacileyo wokuba isebenza njani imarike. Emva kwayo yonke loo nto, njengakuthengiso lwalo naluphi na udidi lweeasethi, yimali oyisebenzele nzima isemngciphekweni.
Isilivere ibe yindawo yokugcina ixabiso kunye nefom yemali ngaphezu kweminyaka engama-4,000. Ngokokugqibela, ubukhulu becala, oku kuye kwaphela phakathi kwe-1930 kunye ne-1970s xa amazwe amaninzi eyishiya ngasemva njengethenda esemthethweni.
Ezi ntsuku, ikakhulu ngenxa yokuzalwa kwe-intanethi- izigidi zabantu zithengisa isilivere mihla le, kwihlabathi liphela. Uninzi lwabarhwebi abalawulwayo baya kukubonelela ngegalelo le-1: 10 kwisilivere, oko kuthetha ukuba ungarhweba namaxesha ali-10 kangangoko unayo kwiakhawunti yakho.
Ngaba ukuthengisa ngesilivere kuvakala kuyinto onomdla kuyo? Ukuba kunjalo, uza kudinga umrhwebi olungileyo ukuze ukwazi ukufikelela kwiimarike. Sikuphathele umqolo, njengoko namhlanje siza kunika iinkcukacha ezisisiseko kurhwebo lwesilivere- ecaleni kweendlela ezininzi onokufikelela ngazo kule ntsimbi ixabisekileyo.
Ngokomgangatho olungileyo, siza kutyhila ezinye iindlela zokurhweba, iimetrikhi eziphambili xa sifumana iqonga, kwaye kunjalo- zii-5 zabarhwebi bezesilivere abaphambili.
Izinto eziSisiseko zokuRhweba ngeSilivere
Apho kungcono ukuqala khona ngaphandle kweziseko ezingenanto zokuthengisa isilivere. Nokuba yeyiphi na impahla onomdla kuyo-nokuba yeyimali, ioyile, okanye istokhwe seAmazon- injongo kukuthengisa iasethi ngaphezulu kokuthenga kwakho. Yiyo loo nto ukwenza iinzuzo.
Nalu urhwebo lwesilivere ngamafutshane:
Cacisa ukuba isilivere izakunyuka na, okanye iwe phantsi kwexabiso langoku
Ukubonisa ukuxelwa kwangaphambili komthengisi wakho-beka a kuthenga or thengisa oda ngokufanelekileyo
Injongo kukuqikelela ngokuchanekileyo kwaye uza nezinto ezingaphezulu kunokuba ubuqale kunye / nokwenza inzuzo
Xa ubeka ikepusi yakho yorhwebo, kubalulekile ukuba ushiye iimvakalelo zakho emnyango. Ukwenza izigqibo kutshintsho lwamaxabiso amafutshane okanye lwexesha elide kwisilivere kunokuba nzima njengoko kunjalo, ngenxa yoko, awufuni uloyiko okanye ukubawa kukhokelele ekuthatheni izigqibo ngokungxama.
Nangona ngaphambili, abantu babedibana ubuso ngobuso ukuze bathengise isinyithi kunye neenkozo ezixabisekileyo, njl.njl. - kwezi ntsuku kwenziwa kakhulu kwi-Intanethi. Kule ndlela, kukho iindlela ezimbalwa zokuthengisa isilivere.
Umzekelo, ukuba ufuna ukurhweba isilivere ngexesha elifutshane, unokukhetha i urhwebo usuku qhinga. Kwabo abangaziyo, ukuthengisa kwemini kubandakanya ukugcina indawo yakho ivulekile ixesha elingaphantsi kosuku olunye. Oku kunokuba nakho ukurhweba ixesha lemizuzwana, imizuzu, okanye iiyure.
Ukuba ufuna ukurhweba ngexesha elifutshane, kodwa ixesha elincinci kunemiyalelo yokuthengisa yosuku-emva koko Ukuguqula ukurhweba inokuba ikomityi yakho yeti. Injongo yokurhweba ngokurhweba kukubambelela kwindlela enokubakho yesilivere. Abathengisi be-Swing bathembele kakhulu kuhlalutyo lobuchwephesha ukubanceda bathathe isigqibo sokuba bangene nini okanye baphume kwezorhwebo-bahlala besebenzisa ukuvavanya ii-odolo zokuyeka
Enye yeendlela ezixhaphakileyo zokurhweba isilivere kule mihla nakwiminyaka ithambekele ekubeni idlule kwiiCFDs (Izivumelwano zomahluko). Ii-CFD zivumela umndilili kaJoe ukuba athengise isilivere ngaphandle kokugcina okanye abe nezigaqa zempahla yexabiso.
Yintoni eqhuba iindleko zeSilivere?
Ukwazi ukuba yintoni eqhuba iindleko zesilivere kuya kukunceda kuphela kwinkqubo yakho yokwenza izigqibo. Isizathu soku kukuba uya kuba nokuqonda okucacileyo kokufanele ukujonga xa usenza uhlalutyo olusisiseko kunye nobuchwephesha.
Ixabiso lesilivere ikakhulu liqhutywa 'kukubonelelwa kunye neemfuno' zentengiso. Kananjalo, ixabiso lesinyithi esixabisekileyo liya kutshintsha amaxesha amaninzi ngalo lonke usuku lokuthengisa.
Masikunike umzekelo olula wokubonelela kunye nemfuno:
ukuba supply ngokunyuka kwesilivere, ixabiso lesilivere liya kuwa. Kungenxa yokuba kukho isilivere engaphezulu kunaleyo bayifunayo abathengi okanye abayifunayo.
Ukuba, nangona kunjalo, ibango lesilivere liyonyuka, kunye nexabiso lalo.
Njengoko ubona, konke malunga nokuba kunikwa malini, kwaye yeyiphi imfuno yentengiso ebanzi. Indlela entle yokujonga ukuthengisa kwintengiso yesilivere kukongeza uhlalutyo lobuchwephesha kunye nesiseko kwisicwangciso sakho sokuthengisa.
Libalwa njani ixabiso lesilivere?
Sonke siyazi ukuba isilivere yinto enexabiso, isinyithi esixabisekileyo - kodwa, ibalwa njani?
Isilivere, efana negolide, irhasi yendalo, kunye neoyile, ihlala ibalwa kwaye icatshulwe kwiidola zaseMelika. Isizathu soku kukuba i-USD ithathwa njengeyona inamandla kwaye yeyona ifunwa kakhulu kwihlabathi.
Xa kufikwa kubunzima besilivere, uya kufumanisa ukuba abathengisi babala iiasethi kwii-oun zetroy. Ngamaxesha athile, iya kucatshulwa kwiikhilogram okanye kwiigrama.
Ngale nto ithethwayo, ngokwemali yokuxhasa ngemali iakhawunti yakho yomthengisi wesilivere, uya kufumanisa ngokubanzi ukuba ungafaka kwiimali ezininzi. Ukuba akunjalo, kuyakubakho intlawulo encinci yokuguqula kwimali eyamkelweyo yeqonga lokurhweba.
Ivula nini iMarike yeSilivere yaMazwe ngaMazwe?
Uyakwazi ukuthatha inxaxheba ekuthengiseni isilivere iiyure ezingama-23 ngosuku. Kungenxa yokuba iimarike zithathe ikhefu lemizuzu engama-60 ngaphambi kokuphinda ungene kwiseshoni elandelayo.
Ukukunika umbono, eMelika ezo yure ziCawe-Lwesihlanu nge-6 emva kwemini ukuya nge-5 ngokuhlwa. Ngokwe-GMT, ezo yure zi-10 ngokuhlwa ngeCawa ukuya nge-9 ngokuhlwa ngolwesiHlanu.
Uninzi lweemarike ze-OTC zesilivere ziyahlangana. Kananjalo, kuya kufuneka ufumanise ukuba abarhwebi abathengisa isilivere abangcono baya kuba nakho ukukunika ukufikelela kwiimarike ezahlukeneyo.
Ndingathengisa njani isilivere?
Kweli candelo lesona sikhokelo sishishina ngokurhweba ngesilivere, siza kungena ngqo kwiindlela ezahlukeneyo oza kuthi urhwebe ngazo.
Ukuthengiswa kwesilivere: iiCFD
Njengoko sichukumise ngokufutshane, ukuthengisa ngesilivere ngeCFD yenye yeendlela ezaziwayo zokuthengisa kwi-Intanethi. Elona candelo lililo onokulithenga uthengise isilivere, ngaphandle kokuba ube ngowakho, uthathe ukuhanjiswa kwayo, kwaye ugcine iasethi.
Endaweni yoko, ii-CFDs zijonga nje ukutshintsha kwexabiso lokwenyani lehlabathi. Esi sisixhobo semali esenziwe ngumthengisi wakho.
Yonke into ekufuneka uyenzile kukuqikelela ukuba ixabiso lesilivere liza kunyuka okanye lihle, kwaye ubeke ukuthenga okanye ukuthengisa iodolo nomthengisi wakho. Esi sisivumelwano 'kunye' yorhwebo ntengiso indawo ekuthethwa ngayo.
Nanku umzekelo olula, ukucoca inkungu kwisivumelwano 'sesivumelwano somahluko':
Ixabiso lehlabathi lesilivere yi- $ 24.04
Umrhwebi wakho weCFD ukwabonelela ngentengiso kwi- $ 24.04
Ixabiso lehlabathi lesilivere lenyuka laya kwi- $ 26.00
Oku kubonisa ukunyuka kwamaxabiso nge-8.15%
I-CFD yakho inyuka ngexabiso nge-8.15%
Njengoko ubona koku kungasentla, i-CFD yakho yesilivere iya kuhlala ibonakalisa ixabiso lehlabathi lokwenyani leasethi
Ngokwesiqhelo uya kufumanisa ukuba ungathengisa ii-CFD zesilivere ngelixa uhlawula imali encinci okanye ungahlawuli ngaphandle kwamaqonga orhwebo. Unokulindela ukusasazeka kokukhuphisana kunye nokufumana amandla kwii-CFD zesilivere.
Kulabo abangaqapheliyo, ukunyusa kufana nemboleko kumthengisi wakho. Oku kukuvumela ukuba urhwebe isilivere ngaphezulu kweemvume zokulinganisa iakhawunti yakho yorhwebo.
Ukuba uhlala eYurophu, eOstreliya, okanye e-UK uya kuthintelwa ukuba ungasifaka kangakanani isicelo kurhwebo lwakho. Oku kungenxa yemida yokulawula yomzimba endaweni. Umzekelo, e-UK nase-Europe ubanjelwe u-1: 10-ikwaboniswa njenge-10x endaweni yomyinge.
Abanye babarhwebi phesheya kolwandle okanye abangalawulwanga baya kubonelela nge-1: 500. Nangona kunjalo, singacebisa ngamandla ukuthintela la maqonga orhwebo. Awuyi kuba nalo naluphi na ukhuselo olulawulwayo. Okwesibini kuko konke-awunako nje ukukhulisa inzuzo yakho nge-500x, kodwa unokukhulisa iilahleko zakho kangangoko.
Isibonelelo esongeziweyo sokurhweba nge-CFD yesilivere kukuba unokwenza inzuzo kwixabiso lesilivere eliwayo kunye nokunyuka.
Oku kufezekiswa ngokuhamba mfutshane. Masikubonise umzekelo:
Iqonga lakho lokuthengisa licaphula isilivere kwi- $ 24.04 ngeoyunce
Uziva ukuba ixabiso liza kuwela ngaphakathi kweeyure
Kananjalo, ubeka thengisa iodolo enexabiso le- $ 1,000
Kwiiyure ezizayo, ixabiso lesilivere lehla nge-1.5%
Uyenzile inzuzo yeedola ezili-15 ukusuka kwi-1,000 XNUMX yeedola yokuthengisa
Ngakolunye uhlangothi, ukuba ufake isicelo se-1: 10, eso sibonda sasiza kuba yi- $ 10,000. Kananjalo, inzuzo yakho kule yorhwebo yesilivere ibiya kuba yi- $ 150, endaweni ye- $ 15.
Njengoko sele kuphawuliwe, kubalulekile ukuba ungawusebenzisi kancinci amandla. Ngelixa ewe, inokukunika inzuzo enkulu kakhulu-ukuba urhwebo lwakho luya kwelinye icala kubomvu. Soloko unyathela ngononophelo.
Izinketho zokuThengiswa kweSilivere
Ngelixa isabelo sengonyama sabathengisi besilivere besenza njalo ngeCFDs - zikho ezinye iindlela. Enye yazo yintengiso yesilivere 'iinketho'.
Izinketho zibhekisa kwikhontrakthi enomhla wokuphelelwa kwayo eqhotyoshelwe kuyo. Ukuba kunokwenzeka ukuba ucinge ukuba ixabiso lesilivere liza kunyuka-ukuthenga umnxeba ukhetho. Oku kwenza ukuba uthenge isilivere ngexabiso elithile, ngaphakathi kwexesha elithile.
Masibeke phambili umzekelo wesilivere iinketho urhwebo ukucacisa:
Uthengile umnxeba iinketho
Ukhetho lokufowuna luyaphelelwa emva kweenyanga ezintathu
Ixabiso lesitrayikhi lihlala kwi- $ 26.00 nge-ounce nganye
Oku kubonisa ukuba uyakholelwa kwixabiso lesilivere kuvuka ngaphezu $ 26- nokuba ngaphambi komhla wokuphelelwa kukhetho, okanye ngalo mhla.
Ngaphambi kokuba ungene kwimarike ngomthengisi wakho, kuya kufuneka uhlawule ipesenti yexabiso lesivumelwano
Le pesenti ibizwa ngokuba 'yiprimiyamu' kwaye kufuneka ihlawulwe kwangaphambili
Masicinge ukuba umrhwebi wakho uhlawula i-3% yepremiyamu yesivumelwano sakho sokukhetha umnxeba
I-premium yakho, kule meko, yi- $ 0.78 (3% ye $ 26.00)
Zimbini iziphumo ezinokubakho zolu rhwebo. Ukuba ixabiso liphezulu ngaphezu 'kwexabiso lesitrayikhi' - unelungelo kodwa awunyanzelekanga ukuba uthenge iasethi. Ngenye indlela, ukuba kwenzeka okwahlukileyo, ulahlekelwa yiprimiyamu ye- $ 0.78- yeyokontraka nganye.
Ukuba ubucinga ukuba ixabiso lesilivere liza kuya bawe phambi komhla wokuphelelwa kwesivumelwano - ubuya kuthenga Beka options endaweni yoko.
Ixesha elizayo lokuThengisa ngeSilivere
Ixesha elizayo lesilivere liyathelekiswa ne-CFDs kuba unokuxhamla kokunyuka kunye nokuhla kwexabiso leasethi. Unokusebenzisa zombini iindlela zokurhweba ukusebenzisa amandla kunye nokunyusa isibonda sakho.
Umahluko omkhulu phakathi kwe-CFDs yesilivere kunye nekamva lesilivere kukuba ikamva linomhla wokuphelelwa liqhotyoshelwe. Xa ikhontrakthi yekamva liphela uphelile inyanzelekile ukuthenga i-asethi engaphantsi (isilivere).
Xa sisithi kufuneka uyithengile i-asethi, awuyi kuba nayo ingxowa ezele ziingqekembe zesilivere ezithunyelwe emnyango wakho. Ezi zivumelwano zihlala zihlawulwa ngekheshi kwezi ntsuku.
Iikontrakthi zexesha elizayo, nokuba yeyiphi na into oyithengisayo, ihlala iinyanga ezintathu. Xa umhla wokuphelelwa ufika, kufuneka uyithenge okanye uyithengise. Njengokukhetha, iikhontrakthi zexesha elizayo zihlala ziza 'nexabiso lesitrayikhi' eliqhotyoshelweyo.
Ukuthengiswa kweSilver Forex
Nangona kunokwenzeka ukuba uyazi ukuba yeyiphi imakethi ye-forex - ukuyicacisa kukuthenga nokuthengisa ngababini bemali.
Uninzi lwabantu lurhweba ngeemali ngokuchasene nezinye iimali, ezinje ngedola yaseMelika ngokuchasene neponti yaseBritane ngokomzekelo (iboniswe njenge-GBP / USD).
Ngale nto ithethwayo, abanye bakhetha ukurhweba ngeemali ngokuchasene nesinyithi esifana negolide okanye isilivere. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuzikhusela kwiindaba ezinkulu zezezimali ezinje ngokunyuka kwamaxabiso okanye ingxwabangxwaba yezopolitiko.
Ukukunika umzekelo, isilivere xa ithelekiswa nedola yaseMelika inokujongeka ngoluhlobo kwiqonga lakho lezorhwebo- iXAG / USD.
Ukuthengiswa kwesilivere: ii-ETFs
Ukuba ufuna ukuthenga isilivere, kodwa ngokungathanga ngqo - cinga nge-ETF zesilivere. Ezi 'mali zorhwebo zithengiswayo' zihlala zilandelela ixabiso lehlabathi lokwenene lesilivere.
Makhe sijonge kwisiseko esisiseko sesilivere ETF:
Unomdla wokuthenga isilivere
Ugqiba ekubeni uthenge i-Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)
I-SIVR ijonge ukusebenza kwesilivere
Ngoku unokufikelela okupheleleyo kwizabelo zesilivere ngaphandle kokufuna ukuba ngumnini weasethi. Ngokuchasene noko, i-SIVR ibeka esweni ixabiso lendawo kwaye ibambe isilivere uqobo. Kananjalo, ukuba ixabiso lehlabathi lesilivere liyenyuka, njengoko kuya kuba njalo notyalo-mali lwakho lwe-ETF.
Amacandelo amaThathu aDumileyo okuRhweba ngeSilivere
Ngoku ekubeni sikunike ukuhla kwezinto ezahlukeneyo zokurhweba ngesilivere, lixesha lokuba sikhanyise ngeendlela zokurhweba.
Ukurhweba kweSilver Swing
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukurhweba ngesilivere ngokubandakanya ukugcina urhwebo luvulekile kangangeentsuku, okanye iiveki ngexesha.
Oku kuthetha ukuxhasa imeko ebanzi yentengiso. Ukugcina usesikhathini kunye nohlalutyo lobuchwephesha kubaluleke kakhulu xa kufikwa kumba wokucinga ngentengiso.
Xa yonke into yalatha kumandla esilivere esomelele, injongo yakho iya kuba kukutshixa kwiinzuzo ngokwenza i kuthenga umyalelo.
Ngokurhweba ngokujikeleza, ungagcina eso sikhundla sivulekile okoko ubona kufanelekile. Ukuba uziva ubungqina bukhomba kutshintsho kwicala lenkqubela phambili, unokudala thengisa ukuze ikhuphe indawo yakho ende. Emva koko, unokubeka i-odolo eyongezelelweyo yokuthengisa ukuze ubambe imeko esezantsi.
Sebenzisa amanqanaba enkxaso
Amanqanaba enkxaso angachazwa 'njengamaxabiso amaxabiso'. La manqanaba aza kukubonisa ukuba zeziphi iindlela zokumelana nenkxaso ezikwiimalike zesilivere ngokuthe ngqo.
Ukukunika imizekelo embalwa:
Ukuba isilivere ibonakala iphakathi kwendlela esezantsi, unokuthatha isenzo a inqanaba lokumisa Ukuthintela urhwebo ekulahlekelweni lixabiso elininzi
Urhwebo ngononophelo ngokwenza i stop-ilahleko Umyalelo phantsi komgca wenkxaso, emva kokungena kwimarike ngaphezu komgca omnye
isilivere scalping Isicwangciso esiliqili esihle kuthi kuthi abo bakhetha ukugxila kwinzuzo encinci kunye neyarhoqo, kunokuba kunethe rhoqo.
Abarhwebi basebenzisa isicwangciso se-scalping bathambekele ekubeni bachume kwindawo yentengiso engazinzanga, ukuvula kunye nokuvala ukuthengisa okuninzi ngosuku. Eyona nto iphambili apha kukuzuza xa ixabiso lesilivere lihlala ngaphakathi kwexabiso elithile ixesha elide.
Ngaphandle koko yaziwa 'njengexesha lokudityaniswa', oku kuvumela isikere ukungena kwimfumba yokuthenga kunye nokuthengisa izikhundla. Ngalo lonke ixesha isilivere ihleli kolu luhlu luqinileyo, i-scalper inokwenza encinci, kodwa iinzuzo rhoqo.
Iingcebiso ngeNtengiso yesilivere
Kungaba yinto encinci ukuhambisa kwilizwe lokuthengisa isinyithi esixabisekileyo, kodwa ungakhathazeki, kukho iimfumba zabanye abathengisi abatsha abanjengawe.
Wonke umntu kufuneka aqale kwenye indawo, kwaye zininzi iingcebiso kunye namacebo okukunceda. Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lweembono eziluncedo onokuzisebenzisa xa uthengisa isilivere kwi-intanethi.
Funda iincwadi zokuThengiswa kweSilivere
Ngokuchwetheza 'iincwadi zokurhweba zesilivere' kwiinjini yokukhangela uya kubona ukuba kukho amakhulu eencwadi ezikhethekileyo zeasethi.
Iincwadi, iikhosi zokurhweba ezisekwe kwi-intanethi, iividiyo zemfundo, kunye neencwadi zokumamela kunokuba yindlela enemveliso yokufunda i-ins kunye nokuphuma kwintengiso yesilivere. Ungakhankanyi uhlalutyo lobuchwephesha kuloo nto.
Gcina ngokungahambelani neendaba zamva nje zesilivere
Njengoko besesichazile ngaphambili, uhlalutyo olusisiseko lubandakanya ukuhambelana nezinto zezezimali zamva nje.
Izinto ezininzi zinokuchaphazela ukubonelelwa kunye neemfuno zentengiso. Oku kubandakanya oku kulandelayo;
Ukungenisa nokuthumela kwamanye amazwe
Isivuno sebhondi sikarhulumente
Sebenzisa imiqondiso yokuthengisa ngesilivere
Ukuba ukugcina iliso kwiindaba akuhambelani neshedyuli yakho yemihla ngemihla ngenxa yezibophelelo zomsebenzi kwaye-jonga imiqondiso yesilivere yokuthengisa. Iimpawu zokuthengisa zesilver zikuthumela iingcebiso zorhwebo kwimpahla yakho oyithandayo.
Isoftware, okanye umntu (kuxhomekeke kumthengisi wakho) -ujonga kwimarike efanelekileyo ekhangela amathuba okurhweba ngesilivere.
Ngokwesiqhelo uya kufumana ukuthenga kunye nokuthengisa iingcebiso, kunye nokucetyiswa kwelahleko yokumisa kunye neodolo zenzuzo. Iimpawu zingathunyelwa ngesaziso sokutyhala kwiselfowuni yakho, okanye kwibhokisi yakho ye-imeyile-kuxhomekeke kumboneleli.
Thina kuFunda 2 urhwebo sikwanikezela ngenkonzo yomqondiso weTelegram ngokupheleleyo. Nangona abathengisi bethu abangaphakathi ezindlwini begxila kwi-forex nakwii-cryptocurrensets - senza amaxesha ngamaxesha sithumela imiqondiso yokuthengisa ngesilivere.
Sebenzisa uphawu lweNtengiso
Abambalwa babarhwebi banika abathengi ithuba lokutyala imali kumrhwebi-bekopa imisebenzi yabo kwileta. Esi sisicwangciso esihle se-newbies okanye abantu abanokukhetha ukurhweba isilivere ngendlela engaphaya.
Inkqubo ngokubanzi imi ngolu hlobo lulandelayo:
Ufumana umrhwebi weprojekhthi ofuna ukukopa-ngokusekwe kwizibalo, impumelelo kwimbali, umngcipheko, kunye nokujolisa kwi-asethi
Gcina imali encinci efunekayo ukukopa loo mntu- umzekelo, i $ 200
Ukuba loo mntu utyale i-2.8% yepotifoliyo yakhe yorhwebo kwisilivere- 2.8% yeepotifoliyo yakho ityalwe kwisilivere
Ngokusisiseko, nantoni na abayithengayo okanye abayithengisayo ibonakala kwipotifoliyo yakho, ngokomyinge wotyalo-mali lwakho
Isilivere yoRhwebo ngePhepha Imali
Ukuthengisa isilivere ngemali yamaphepha akufuneki kutyeshelwe, njengoko iiakhawunti zedemo zabarhwebi abatsha kwaye nabo banamava.
Ngelixa ayinguye wonke umthengisi oza kubonelela abathengi ngeakhawunti yeedemo, ezo ziyenzayo ziya kuzinika simahla. Ngokubanzi, oku kubandakanya isixa esikhulu semali yedemo kunye nemo yokurhweba elinganisa imeko yokwenene yentengiso yesilivere.
Iimpawu eziphambili: Ukufumana uMrhwebi oPhambili weSiliva
Amathuba ngoku unomdla wokufikelela kubathengisi besilivere ababalaseleyo kwinxalenye yesi sikhokelo. Oko kwathethileyo, kufuneka ulumke, kuba ayingabo bonke abathengisi abakwi-Intanethi abangalifanelanga ishishini lakho.
Ngale nto engqondweni, siza kuqala ukugubungela iimetrikhi eziphambili esicinga ukuba kufuneka uzithathele ingqalelo. Oku kuya kukunceda kukhangelo lwakho lweqonga lokurhweba ukuze wenze imisebenzi yakho yesilivere.
IKomishini kunye neminye iMirhumo
Emngciphekweni wokuchaza okucacileyo, ukujonga itafile yentlawulo yeqonga lokurhweba kunye nemigaqo kunye neemeko yenye yezinto zokuqala ekufuneka uzenzile.
Emva kwayo yonke loo nto, unokuba phezulu, usenza izigqibo ezintle kurhwebo ngalunye- kodwa ukuba umrhumo uyaphanga awuyi kubona kakhulu kwindlela yenzuzo.
Umzekelo, unokufumanisa ukuba amanye amaqonga orhwebo ahlawulisa ngaphezulu kwe- $ 12 kurhwebo ngalunye. Okokungena kunye nokuphuma kwesithuba. Njengoko unokucinga, ukuba akulumkanga, ezi khomishini zinokongeza. Khawufane ucinge ngokuhlawula i $ 24 nje nge kuthenga kwaye thengisa indawo!
Oko kwathethi, uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi baya kuhlawulisa ikhomishini ngohlobo lwepesenti yorhwebo lwakho.
Masithi, sithetha ngokungacingi ukuba umrhwebi wakho umisela umrhumo we-3%. Oku kuthetha ukuba xa ubambisa i-1,000, 30 yeedola, kuya kufuneka uhlawule ikomishini i-1.5, ukuba abiza i-15% uhlawula i-XNUMX yeedola- njalo njalo.
Xa ufikelela kwiiCFD, abanye babarhwebi besilivere abangcono abayi kukuhlawulisa nesenti kwikhomishini yolonwabo. Endaweni yoko baya kwenza imali yabo nge sasaza.
Ngoku, kwezinye iifizi. Ngelixa ayinguye wonke umrhwebi oza kubabiza, kukho iifizi ezimbalwa ngakumbi ekufuneka uzibone xa ulandela iqonga lokuthengisa ngesilivere.
Sizidwelisile ezi ntlawulo zingezantsi:
Imirhumo yezemali yangokuhlwa
Imirhumo yokufumana imali ngobusuku, okanye 'imali eguqulwayo' ihlawuliswa xa urhwebo lwesilivere lushiywe luvulekile ubusuku bonke. Ithelekiswa nomrhumo wenzala, ohlawulwa kumrhwebi wakho ukugcina isikhundla sakho sivulekile kuwe. Olu hlobo lwentlawulo luqhagamshelwe ngokukodwa kwiiCFDs.
Ayizizo zonke iifemu zabarhwebi ezikwi-Intanethi ezibiza lo mrhumo. Nangona kunjalo, kufanelekile ukukhankanywa. Njengoko unokuthelekelela ukuba le ntlawulo ihlawuliswa emva kwexesha lokungasebenzi kwiakhawunti yakho yorhwebo. Amanye amaqonga orhwebo axela ukuba awuzange urhwebe okanye ufake imali kwiakhawunti yakho kwisithuba seenyanga ezi-6 okanye ezili-12- umrhumo uyabizwa.
Le ntlawulo inokwahluka, nangona sifumanisa ukuba le nto ihlala iphakathi kwe- $ 10 kunye ne- $ 40 ngenyanga-ehlawulwa emva kwexesha elichaziweyo lokungasebenzi kwaye iya kuyikhupha iakhawunti yakho ukuba unayo imali kuyo.
Imirhumo yokuGuqulwa kweMali
Kwakhona, oku akuyiyo intlawulo ebonwa kuwo wonke umrhwebi okwi-Intanethi. Umzekelo, amanye amaqonga orhwebo asebenzisa iidola zaseMelika kuphela, ke kulindeleke ukuba uhlawule umrhumo omncinci ukuba ufuna ukufaka imali eyahlukileyo.
Oku kuhlala kuyipesenti encinci yedipozithi yakho- njenge-0.5% umzekelo.
Umrhwebi ogqiba ngaye kufuneka abe newebhusayithi efanelekileyo. Oku kunjalo ngakumbi kubathengisi besilivere abangenamava.
Ukuba neqonga lokurhweba ekulula ukuhamba kulo kuya kwenza ukuba urhwebo lwakho luzame ngamava athambileyo. Ezi ntsuku, uninzi lwethu lukhetha ukurhweba ngesilivere kwi-intanethi, akufuneki ujonge kude kwiwebhusayithi enkulu.
Amaqonga amahlanu enza olona shishino lwethu lubalaseleyo lwabarhwebi besilivere lonke linamawebhusayithi ekulula ukuwasebenzisa, okwenza kube yimpepho kubarhwebi bawo onke amanqanaba ezakhono.
Iinketho zeDiphozithi kunye nokuRhoxa
Ukuze uqalise uhambo lwakho lwesilivere, kufuneka umrhwebi. Ngaphaya koko, kuloo broker uza kuqhuba urhwebo lwakho-kuya kufuneka unikezele ngemali ethile.
Ukunyusa iakhawunti yethu yokurhweba kulula- nangona kunjalo, kuya kufuneka ufumane umthengisi owamkela indlela oyikhethileyo yokuhlawula.
Kuya kufuneka ukuba iindawo ezininzi zokurhweba zamkele iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula, ezinokubandakanya amakhadi etyala / amakhadi etyala, ukuhanjiswa kwebhanki, kunye nezipaji ze-e ezinjengePayPal, iNeteller, kunye neSkrill. Umrhwebi ngamnye uya kwahluka ngokoko uhlala ujonga ukhetho lwakho.
Khumbula ukuhanjiswa kwentambo kuthatha ixesha elide ukufikelela kwiakhawunti yakho, kungoko kunokulibazisa ukuthengisa kwakho ngesilivere ngeentsuku ezingama-2-3.
Enye imetriki ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ngummiselo. Ngokujongana kuphela nabarhwebi abalawulwayo, uyazikhusela, kunye nemali yakho evela kubanikezeli abanomthunzi kwisithuba se-Intanethi.
Abarhwebi abathengisa isilivere abangcono bafuna ukufumana iphepha-mvume komnye okanye kumaqumrhu ahloniphekileyo olawulo. Le mizimba igcina indawo yokuthengisa ikhuselekile kuye wonke umntu ngokunyanzelisa imigaqo kunye nemigaqo.
Ukongeza ekubambiseni abathengisi ngokuphendula kwimicimbi eyahlukeneyo yokhathalelo lwabathengi, banyanzelekile ngokusemthethweni ukuba bathathe inxaxheba kulwahlulo lwengxowa mali yomthengi.
Amanye amaqonga olawulo ahlonitshwayo nathembekileyo kwindawo yokuthengisa isilivere adweliswe apha ngezantsi:
Igunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA): e-UK
IKomishoni yoRhwebo yeXesha elizayo (i-CFTC): I-US
Umbutho weSizwe wexesha elizayo (NFA): e-US
IKhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano yaseCyprus (ICSSEC): ISipro
Igunya loLawulo lweMarike yaseSwitzerland (FINMA): ISwitzerland
Ikhomishini yoKhuseleko kunye notyalo-mali yase-Australia (ASIC): Ostreliya
Ukubeka ngokulula, ukusasaza iikowuti zakho zomthengisi kuwe sisithuba phakathi kwexabiso lokuthengisa kwaye ubuze ixabiso lesilivere. Ukusasazeka kunikezelo kuya kwahluka kakhulu kubarhwebi kubarhwebi.
Ukuqina kokunwenwa, kungcono kuwe. Jonga abarhwebi bethu abarhwebi abadweliswe apha ngezantsi malunga nokusasazeka kukhuphiswano kwii-CFD zesilivere.
Ixesha lifikile lokuba sichaze abarhwebi bethu besilivere abangcono kakhulu ngo-2021. Njengoko besesitshilo, amaqonga orhwebo akwi-Intanethi aya kuba yinxalenye ebalulekileyo yamava akho orhwebo lwesilivere.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuqinisekisa ukuba inkampani yabarhwebi iyakwazi ukukunika ukufikelela kwiimarike zesilivere. Siye saqulunqa uluhlu olungezantsi lwabathengisi bezesilivere abaphambili, bonke abalawulwa ngokupheleleyo kwaye banikezela nge-CFD zesilivere-kunye nokusasazeka kukhuphiswano.
1. I-AVATrade-Trade Silver CFDs Ngokusasazeka
I-AvaTrade ibixhobisa abarhwebi kwiminyaka embalwa elungileyo ngoku. Iqonga linceda abathengi kumazwe angaphezu kwe-150 kwihlabathi liphela. Ngapha koko, ilawulwa yi-ASIC, i-FSA, i-FFAJ, i-FSCA, kunye ne-ADGM.
I-AvaTrade ibonelela nge-CFD zesilivere kunye nokusasazeka kokhuphiswano. Ngokweqonga, xa kuthengiswa isilivere, abathengi banokulindela ukusasazeka kwe- $ 0.029. Abathengi banakho ukufikelela kwiakhawunti yedemo yesilivere yasimahla nayo- nangona, ngelishwa, oku kusebenza kuphela kwiintsuku ezingama-21.
Ukuba uyayithanda imbono yokukwazi ukuthengisa isilivere naphi na apho ukhoyo uya kuyivuyela usetyenziso onokuyikhuphela 'i-AvaTradeGO'. Oku kwenza ukuba ubenakho ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho, kwaye uthenge kwaye uthengise ekuhambeni-naphina apho unonxibelelwano lwe-intanethi.
Kubalandeli beMT4 / 5 phaya, i-AvaTrade ixhasa ngokupheleleyo amaqonga eqela lesithathu. Oku kuthetha ukuba unokukhuphela isoftware yeMT4 / 5 kwaye uyixhume kwiakhawunti yakho yomthengisi.
I-AvaTrade ibonelela ngomxholo opheleleyo wemixholo yemfundo kunye nengcaciso, ebaluleke kakhulu nokuba ungathengisa ngoluphi udidi lweeasethi.
Iqela lenkxaso yabathengi be-AvaTrade lisebenza iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezintlanu ngeveki ngeendlela ezahlukeneyo zonxibelelwano. Ungaqala ukurhweba isilivere ngalo broker ngemali encinci njenge- $ 5 yedipozithi encinci.
Ukuphakama kwe-1: 10 kwintengiso yesilivere
Idemo yasimahla yokuthengisa isilivere isebenza kuphela kwiintsuku ezingama-21
2. I-Capital.com -IKhomishini-yasimahla kunye noKhuphiswano isasazeka kwiSilver
I-Capital.com yinkampani yokurhweba ehloniphekileyo enikezela phantse abathengi abangama-800,000 ngaphezulu kweemarike ezahlukeneyo ezingama-300.
Iqonga lokurhweba libonelela ngee-akhawunti zedemo yesilivere ye-CFD yasimahla, kunye nezifundo zokurhweba, kunye neevidiyo ezahlukeneyo zemfundo. Eli qonga lokurhweba lineeofisi eLondon, eCyprus, eGibraltar, naseBelarus. Ngaphezu koko, umthengisi unelayisensi epheleleyo kwaye ulawulwa yi-FCA, CySEC., ASIC, kunye ne-NBRB.
Ewe, ngenxa yobume bezorhwebo, ukusasazeka kwehla. Kodwa, ngexesha lokubhalwa, ukusasazeka kwesilivere yi-0.030 kwi-Capital.com. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa unokufikelela kwi-1: 10 xa uthengisa isilivere kweli qonga.
Idipozithi encinci yi-20 euro, iidola zaseMelika, iiponti zaseBritane- okanye iPoland złoty. Xa kufikwa kwinkxaso mali kwiakhawunti yakho yorhwebo, ungasebenzisa iindlela ezahlukeneyo ezinje ngogqithiso ngocingo, imali yetyala kunye namakhadi etyala, kunye ne-e-wallets ezinje ngeSkrill.
Ukurhweba ngaphandle kwekhomishini yesilivere
Ilawulwa yi-FCA, CySEC, ASIC, kunye ne-NBRB
Vula iAkhawunti ngeNtengiso yeNtengiso yeSilivere ngoku
Ngoku ukuba sidwelise abarhwebi besilivere abathengisa kakhulu, konke okushiyekileyo kukuba ubhalise.
Njengoko uninzi lwamaqonga orhwebo enenkqubo efanayo yobhaliso, siza kukunika isikhokelo esine-3 esilula sokukuqalisa.
Inyathelo lokuqala-Bhalisela ukurhweba ngeSilivere
Nje ukuba ufumene umrhwebi okwi-intanethi oyithandayo, unokukhetha ukubhalisa. Ngale nto engqondweni, yiya kwiwebhusayithi kwaye ucofe iqhosha elithi 'sayina' - eliya kuthi gca kwiphepha.
Okulandelayo, ngokwe-KYC inyanzeliswa yimibutho elawulayo-umrhwebi wakho uya kufuna ubungqina bokuba ungubani.
Uya kucelwa ukuba ufake olu lwazi lulandelayo ukuze ubhalise:
Emva kwesiseko, kuyakufuneka uthumele ikopi ecacileyo yepaspoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Le yiprotocol eqhelekileyo enamaqonga orhwebo aneelayisensi, ikakhulu ukuthintela ulwaphulo-mthetho kwezemali kwiidigri ezahlukeneyo.
Inyathelo lesibini-Iimali zeDepos kwi-Akhawunti yakho
Okulandelayo, kuya kufuneka unike imali iakhawunti yakho entsha yokuthengisa isilivere.
Khetha ngokulula uhlobo lwentlawulo kuluhlu olwehlayo lwento eyamkelweyo kwaye ukhethe ixabiso lemali.
Inyathelo lesithathu-Beka uMyalelo
Ngoku ukuba iakhawunti yakho entsha yokuthengisa isilivere inyukile kwaye uyasebenza, ungaqala urhwebe.
Thatha isigqibo sokuba yeyiphi indlela ocinga ukuba ixabiso lesilivere liza kuhamba kwaye ubeke iodolo yakho ngokufanelekileyo. Kananjalo nokusebenzisa umgangatho kuthenga kwaye thengisa iiodolo, kufanelekile ukulawula umngcipheko / umvuzo ngokusebenzisa stop-ilahleko kwaye Thatha inzuzo iiodolo.
Ngapha koko, kwaye apho kunokwenzeka, kusengqiqweni ukuqala nge-akhawunti yedemo yesilivere yokurhweba. Ayisiyiyo kuphela ukufumana iinyawo zakho ngokurhweba, kodwa ziluncedo ekuqondeni ukuba leliphi icebo elinokuthi likulungele xa ufikelela kwiimarike zesilivere.
Sicinga ukuba ngokufunda izikhokelo zoqeqesho zesilivere ezinje kwaye uqhuba uphando lwakho oluninzi-umile ithuba lokulwa nokwenza ukhetho oluchanekileyo- kwaye ke inzuzo.
Sekela izigqibo zakho ekubeni ungene okanye uphume kurhwebo ngasemva kohlalutyo kunye nolwazi. Oku kusebenza ngakumbi kunesifundo esinexabiso kwinto ongafanele uyenze. Ukuqagela okungaboniyo kunokuba ngumrhwebi ongenamava wokuwa.
Zininzi izixhobo eziluncedo ezikhoyo kubathengisi besilivere, ezinje ngeencwadi, iikhosi ezikwi-Intanethi, kunye neevidiyo zemfundo. Emva koko kukho imiqondiso yokurhweba ngesilivere, iirobhothi ezizenzekelayo, kunye nabathengisi bekopi ekufuneka beqwalasele. Ukuba awukaqiniseki ukuba yeyiphi eyona ndlela ilungileyo kuwe - ziqhelanise neakhawunti yedemo ukuzama izimvo ezimbalwa.
Ingcebiso yethu yokugqibela kukukhetha ukujoyina umthengisi olawulwayo. Ngale ndlela uyazuza kulwahlulo lwengxowa-mali yabaxhasi, kunye nolunye ukhuselo. Awona maqumrhu alawulayo amkelweyo kwihlabathi yiFCA, ASIC, CySEC, NBRB kunye nezinye ezimbalwa.
Ngaba ndingathengisa ngesilivere ngemali yamaphepha?
Ewe. Ukubonelela umthengisi wakho unikezela abathengi ngeakhawunti yasimahla, uya kuba nakho ukurhweba isilivere kwindawo eyiyo-yehlabathi-ngemali yamaphepha.
Ngaba ndingathengisa ngesilivere kwi-intanethi?
Ewe. Ngapha koko, uninzi lwabathengisi besilivere ngoku bakhetha ukwenza njalo kwi-Intanethi. Khangela nje umthengisi onokukunika ukufikelela kwiimarike zesilivere.
Ndiyakwazi ukusebenzisa ubungakanani kurhwebo lwesilivere?
Ewe. Unokufaka isicelo kwi-CFD zesilivere. Abarhwebi abalawulwayo banikezela abathengi umyinge we-1: 10 ngokwemiqathango. Kuthetha ukuba unokurhweba ngesibonda amaxesha angama-10 amakhulu kunale unayo.
Ngaba ndingatyala imali kwiingqekembe zesilivere ephathekayo?
Unokutyala imali ngokwesilivere ebonakalayo. Nangona kunjalo, ngenxa yeendleko zeinshurensi kunye nemirhumo eqhotyoshelweyo ayicebisi. Ngokuthenga isilivere nge-ETF, awudingi ukuba nexhala malunga nokugcinwa okanye ulungiselelo kunye neendleko zokuba nesinyithi esixabisekileyo.
Ngaba ndingazuza xa ixabiso lesilivere liwa?
Ewe. Eyona ndlela yokufumana inzuzo kukunyuka okanye ukuwa kweasethi kukuthengisa isilivere ngee-CFDs. Ngale ndlela, unokukhetha ukuba 'ufutshane' kwisikhundla.